Ny tahan'ny fananganana iOS 14 dia efa manakaiky ny 50% | Vaovao IPhone
Ny iOS 14 dia efa napetraka amin'ny fitaovana efa ho 50%
Angel Gonzalez | | iOS 13, iOS 14, About us
Aleo tara toy izay tsy mbola nisy. Tonga tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 14 septambra ny iOS 16. Milaza amin'ny fomba ofisialy izahay satria nanana efa-bolana niaraka tamin'ny beta ho an'ny developer sy ny besinimaro. ny tahan'ny fampidinana Tamin'ny herinandro voalohany dia azo ekena izany, araka ny hitantsika eo amin'ny sary etsy ambony. Na izany aza, tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra dia nijanona 2% isan-kerinandro fotsiny izy io. aza fampidinana dia noraiketina voalohany Tsy dia ampitahaina amin'ny iOS 13 izy ireo tamin'ny taon-dasa. Noho io fanaraha-maso io dia afaka mahazo antoka isika fa amin'izao fotoana izao misy fitaovana maro kokoa amin'ny iOS 14 noho ny an'ny iOS 13 ary ny Ny tahan'ny fananganana iOS 14 dia 46,54%.
Spotify farany nandefa ny widget-ny ho an'ny efijery an-trano iOS 14
iOS 14 dia manatsara ny tahan'ny fananganana azy ary saika mahatratra 50%
Ny rafitra fiasa vaovao dia nitondra ambaratonga fanatsarana kokoa noho ny fahatongavan'ireo widgets amin'ny efijery an-trano. Ho fanampin'izany, ny rafitra dia nahazo fanovana madinidinika amin'ny interface interface ho tsy dia manelingelina loatra amin'ny antso na ny fahatongavan'ny tranomboky fampiharana. Ireo fanovana ireo ho an'ny mpampiasa maro dia efa antony manosika hiroso amin'ny fanovana avy amin'ny iOS 13 ka hatramin'ny iOS 14. Rate ny tahan'ny fampidinana ary ny tahan'ny fiovana amin'ny rafitra fiasa iray mankany amin'ny iray hafa manome antsika ny hevitry ny haavon'ny fanovana sy ny fandraisana ny rafitra fiasa vaovao. Etsy ankilany, azontsika atao ny mampitaha an'ity data ity amin'ny taon-dasa izay nivoahany avy amin'ny iOS 12 ka hatramin'ny iOS 13 niaraka tamin'izay.
Amin'izao fotoana izao, iOS 14 dia saika nahatratra 50% ny fitaovana izay fantatro izao manara-maso izy ireo. Raha ny marina, ary ny tena marimarina kokoa, 46,54% dia efa manana ny rafitra fiasa vaovao napetraka ao amin'ny fitaovany. Raha mbola misy 46,16% izay mbola manana iOS 13. 7,29% dia manana kinova alohan'ny fametrahana ny iOS 13 hatramin'ny nijanonany tamin'ny fahazoana fanavaozana na nanapa-kevitra ny tsy hanavao ireo kinova avo kokoa.
Andao jerena ny fampitahana amin'ny data tamin'ny taon-dasa. Ny fotoana nitrangan'ny sorpasso ny rafitra fiasa vaovao mifanohitra amin'ilay taloha misy ny iOS 12 sy ny iOS 13 dia tonga tamin'ny 7 Oktobra. Na izany aza, tamin'ny iOS 14 dia niseho androany 28 Oktobra. Ho fampitahana dia hitantsika koa fa ny iOS 13 dia navoaka tamin'ny 19 septambra 2019, raha ny iOS 14 kosa dia navoaka tamin'ny 16 septambra 2020.
Raha fintinina dia ny ny fananganana ny rafitra fiasa vaovao dia niaina fitomboana mitombo tao anatin'ny tapa-bolana voalohany dia nisy izany. Na izany aza, tsikaritra ny fitomboan'ny isan'ny fisintomana io mandritra ny volana Oktobra. Na dia afaka manamarina izany aza isika Ny iOS 14 dia efa amin'ny fitaovana maro kokoa noho ny iOS 13 mikasika 50%.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 13 » Ny iOS 14 dia efa napetraka amin'ny fitaovana efa ho 50%
Apple dia hanamafy ny fivoaran'ny safidy hafa amin'ny motera fikarohana an'ny Google